Warbixin: Waa Maxay Sababta Uu Lionel Messi Uu U Badelay Midabka Timihiisa – (Isaga Ayaa Ka Jawaabaya)
HomeWararka MaantaWarbixin: Waa Maxay Sababta Uu Lionel Messi Uu U Badelay Midabka Timihiisa – (Isaga Ayaa Ka Jawaabaya)
05/09/2016 Samatar Mohamed
Kabtanka xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa xilli ciyaareedkan cusub garoomadda la soo galay qaab cusub oo aan hore looga baran, kadib markii uu bedalay midabkii looga bartay timihiisa.
Hogaamiyaha kooxda Barcelona oo wax laga weydiiyay naqshada cusub ee timihiisa u midabeeyay, waxa uu ugu dambeyntii shaaca ka qaaday sababta rasmiga ah ee ka dambeysa inuu bedalo midabka timahiisa xagaagan.
Xiddigan ayaa badelay midabka timihiisa dhammaadkii bishii July markaas uu noqday mid ka mid ah hadal heynta ugu balaadhan ee barraha bulshadda, markii ay sawir muujinaya wajigiisa cusub soo dhigtay barteeda Instagram-ka gabadha ay saaxiibka yihiin ee Antonella Roccuzzo.
Lionel Messi ayaa dib ugu laabtay dalkiisa Argentina markii tababare Bauza uu ku qanciyay inuu ku soo laabto qaranka kulan ay 1-0 ku dhaafeen Uruguay, ciyaar ka tirsaneyd isreeb-reebka koobka adduunka wadamada Koonfurta America markaas oo xiddigan uu dhalliyey goolka ay guusha ku heleen.
Si kastaba Television laga leeyahay Argentina ayaa weydiiyay waxa ku dhalliyey Lionel Messi inuu badelo midabka timihiisa. “Waxaan sameeyay isbadel si aan uga soo bilaabo halka ugu hooseysa. Waxaa soo baxay murano baddan oo ku saabsan wixii igu dhacay waxaana nafsadeyda u sheegay waa inaad ka nasato arrintan, isla markaana aad mar kale dib u bilowdo” ayuu yidhi Leo.
29-sanno jirkan heerka caalami ayaa xaalad xun la kulmay markii uu 3 sanno oo xidhiidh ah dalkiisa u hogaamin waayey inuu koob la qaado isaga oo la tiigsaday Saddex Final oo muhiim ahaa.